Thursday July 13, 2017 - 07:47:11 in Articles by Super Admin
Waagacusub.net - Gudoomiyaha gobolka Banaadir Mr Taabit Cabdi oo Muqdisho looga bixiyay Taabit Gorgoro ayaa fadeexadii afaarad wajahay kadib markii uu ku hungoobay ,oo shaqeeyn waayey amar uu ku mamnuucay in shacabka lacag ku galaan Beerta loo dalxii
Gudoomiye Taabit ayaa go’aankiisii ka laabtay kadib markii maamulka Beerta Nabadda sheegeen in hadalkiisu yahay Riyo maalmeed iyo qof iska hadlay .
Gudoomiye Taabit Cabdi wuxuu horey u soo saaray Amaradaan:
1- In Gaadiidka Amisom mari karin wadada Maka Al Mukarama laakiin waa shaqeeyn waayey oo hadda ayey ka sii dareen .
2- Wuxuu amar ku bixiyay inaan Gaadiid la dhigan karin hareeraha laamigga Maka Al Mukarama laakiin hadda unbaa meel walba la dhigtay.
3- Wuxuu amar ku bixiyay in magaca Banaadir laga dhigay Benaadir sidaas darteedna tilaabo laga qaadi doono qofkii isticmaalo magaca saxda ah ee Banaadir .
Gudoomiye Taabit magaciisii wuxuu noqday mid lagu maadsado isagoo lagu qasbay inuu ka laabto Benaadir ,hadana isticmaalo magaca Banaadir.
4- Gudoomiye Taabit wuxuu amar ku bixiyay inaan beerta Nabadda dadka lacagta 2 dollar laga qaadi karin laakiin markii maamulka beertaas shaaciyeen ineysan u hogaansameen amarkaas wuxuu Taabit Cabdi ugu dambeeyn Saxaafadda u sheegay in amarkaas uu ka laabtay.
Sikastaba ha ahaatee, Fadeexadahaan isbarkan ee Gudoomiye Taabit hareeyay waxeey ka marqaati kacayaan go’aanadda aan ka fiirsashadda laheyn ee Madaxda Dowladda Fudeed Farmaajo ?